Iholide ku-nhlonhlo exotic YaseCrimea, akungabazeki, kuyinto umzwelo ongenakulibaleka zonke izivakashi. Uma sisondela ukuhlela iholide kusengaphambili futhi unqume ukuthi uvakashele eCrimea, wokuphumula ukhululekile futhi okuphumuzayo kule ndawo enhle kangaka kuzokhulisa kaningi. Esigodini ngasinye futhi edolobheni leli pharadesi khona ngumnikazi ezikhangayo ekhethekile futhi eyingqayizivele. Izikhangibavakashi e eCrimea abakwazi kuphela ukuthi iphromothiwe zokungcebeleka abadumile, kodwa nemizana onokuthula nesizotha futhi ngezinye izikhathi ngisho zasendle, emizileni maloprotoptannyh.
esikhumbuzo yezakhiwo eCrimea
esikhumbuzo yezakhiwo yeNhlonhlo YaseCrimea, okuyinto ecebile kakhulu, kahle walondoloza ukuba izinsuku zethu, futhi izivakashi zabo bonke ubudala. Imane Asikwazi ukushalazela lezi zindawo zomlando. izigodlo YaseCrimea nezigodlo mihle futhi eyingqayizivele. Uhlu ingaqhutshezwa eside, futhi noma iyiphi iholidi ngeke ngokwanele ukuba okungenani kanye ziyangena kulezi amagugu yezakhiwo kanye shí umlando. Ukuphumula elisogwini oluseningizimu ye, ukuze banqume ukuthi bazokwenzenjani uvakashele eCrimea, kulula, ngoba izigodlo ngokuyisisekelo edume kakhulu kule ndawo.
Palace "Dulber" Grand Duke uPetru Romanov, esemgwaqweni Mishor, esigodlweni Bala Vorontsov e Alupka, inqaba esiyingqayizivele phezu kwedwala "Isidleke Swallow sika" e Gaspra - zonke lezi zindawo kukhona ikhadi ukubizwa nhlonhlo.
Ayikho ngaphansi abadumile Yusupov inxuluma e Koreiz kuthatha hhayi kuphela uhambo, kodwa futhi kunikeza ithuba uchithe amaholidi kwakho efulethini ubudala, okuyinto manjalo yathatha asebukhosini, uMongameli Roosevelt, kusho uNdunankulu Churchill kanye nezinye ubuntu abaningi abadumile.
Zothando Massandra Palace sifana umbhoshongo Fairytale izincwadi zezingane, nokunye abathandwa izivakashi. Isigodlo Prince Golitsyn ngokuthi "Yasnaya Polyana", okuyinto manje kulesi sibhedlela, futhi okuthakazelisayo nokuwusizo azinake.
Nquma ukuthi iyiphi ukuvakashela eCrimea, izigodlo nezigodlo kufanele unake okukhethekile, ngoba lokhu ubuhle kwenye indawo.
South Coast - lokhu kungahle resort zikanokusho kunazo exotic ogwini oLwandle Olumnyama. Ngilinganisela lokhu ekhoneni isithunzi omkhaya Russian koMbusi, ngakho ekuqaleni kwekhulu lama-20 e-Livadia solar, sizungezwe YaseCrimea Izintaba amapaki amahle, odumile nanamuhla esigodlweni lakhiwa.
Livadia Palace - ngobuciko izakhiwo kweqiniso. Izigidi zezivakashi kusukela emakhoneni ezahlukene wonke unyaka wonke bavame ukuvakashela kule ndawo. Kuyo ehlobo umndeni Romanov oCwebileyo kahle, kusukela esigodlweni ngokubabazekayo yakhiwa ngamatshe amhlophe futhi kahle baye emaphandleni ezizungezile. Trip ku Livadia Palace Uzokhanga kubo bonke abantu ngothi lwabo. Isibhakabhaka Unforgettable izikhathi imperial udluliselwa izivakashi, kanye nabaqondisi abanekhono, othandweni nale esigodlweni, tshela zonke izimfihlo kanye nomlando oqhubeka kule ndawo enhle.
Lapho ekhetha lokho ukuvakashela eCrimea, qiniseka ukuba banake ukudalwa yemvelo - emihumeni eCrimea. Amazing lemimoya Peninsula wehlukile futhi eyingqayizivele. Ngokokunye ukulinganisela, emihumeni eCrimea, ezingaba yinkulungwane, kodwa izivakashi ifakwe kuphela ezinye zazo.
osayizi Iningi nokudilikelwa okuthakazelisa kakhulu - Red, yaqanjwa umbala sici obomvu-brown oxide yensimbi, lapho ubunjalo nombala.
Kuyinto enkulu kunazo zonke e-eCrimea, futhi ezinye Inama sokuhambela. Uhambo oluqondiswayo ihlala amamitha angaba ngu-500, amehlo izivakashi evulekile eziningi izindawo engavamile, sinters yinqaba kanye okwakheke, amahholo ezinhlanu futhi engavamile ubuhle komhlaba nezimpophoma.
"Melodies Chater Dagh"
Massif Chater-Dag ingenye izindawo ezithakazelisayo eziningi. Emhumeni edume kunazo ifakwe ngokuvakashela izivakashi - Marble Umgede. Yavula esanda kutholakala, futhi manje lenqwaba izivakashi nezakhamuzi eCrimea nethuba lokujabulela unyaka ubuhle bomhlaba ngomshoshaphansi.
Marble emhumeni okuthiwa ngoba itholakala emadwaleni zemabula namathempeli ngokhonkolo namatshe. Mina ngidalile le amanzi emhumeni lwangena lapha izigidi zeminyaka. Ngaphakathi Marble Umgede lifana eqandisiwe ice esigodlweni.
amakamelo amahlanu amahle ngokungavamile eyovulwa emehlweni ezivakashi, futhi kuhambisana uhambo umculo omangalisayo, ezwakala e eHayidese ngendlela ekhethekile kahle futhi enhle. "Melodies Chater-Dag" - uhambo oluya Marble Umgede, okuyinto kuwufanele ukuvakashelwa wonke umuntu.
Ngaphezu le migede, zikhona yini ezinye izindawo ezithakazelisayo eCrimea, okuyizinto akukho muhle kangako kodwa amahle.
Imoto encane ukuze Mount Ai-Petri
Ubuhle bemvelo, inhlonhlo ye-kanye izikhumbuzo libanakekele ekhethekile ngoba zahlukahlukene ngakho futhi ehlukile ngemva ukuvakashelwa yabo ufuna ukubuyela ngokuphindaphindiwe lokhu epharadesi emhlabeni - eCrimea.
Yini ukuvakashela futhi qiniseka okokuqala, bonke uyazinqumela, kodwa kukhona izindawo ezithandwa kakhulu.
Imoto encane ukuze Mount Ai-Petri - omunye lezo zindawo ukuthi zivame ukuba ahambele wonke izivakashi. Kusinda indlela waphakanyiselwa emkhathini wezulu nomhlaba. Imoto encane ukuze iphuzu esiphezulu eCrimea uhlukile, futhi akuyona into engavamile emhlabeni.
Ngesikhathi phezulu Massif entabeni izivakashi ukuvula ukubukwa ekhexisayo lonke ugu oluseningizimu ye-eCrimea.
Uhambo nezingane eCrimea
Abazali nezingane ngeke be bored eCrimea. Inani elikhulu of amaphakheji kanye izinkambo ihlelwe ikakhulukazi esizukulwaneni esisha. Izintandokazi uhambo umzila kukhona Yalta zoo futhi esobala enokukhanya kwelanga inganekwane.
I zoo, e ezivalekile ivulekile, siphile lizalele ezingaphezu kuka-100 izilwane nezinyoni. I zoo itholakala umhosha entabeni, nemvelo umbukwane inikeza ngato tonkhe tinhlangotsi.
Lwasemaphusheni izinhlamvu Glade inganekwane engengaphansi sokulinda ezithakazelisayo futhi round for izingane ukuvakashela.
amapaki amanzi eziningi, amahlengethwa, eCrimea amapaki ezokuzijabulisa futhi wayethandwa kakhulu futhi AboPhiko yizivakashi kokubili abadala nezingane ngokufanayo.
Enhlonhlweni yaseCrimea ngaphezu izikhumbuzo zemvelo ezicebile eminyuziyamu. ECrimea ubuhle waphefumulela lokusungula yezimbongi nabaculi owadala yobuciko wabo, njengoba kuleli pharadesi elithokomele.
Ngokwesibonelo, Antona Pavlovicha Chehova House-Museum e Yalta, futhi eyithinta ehlobo e Gurzuf wayemthanda futhi wavakashelwa izivakashi eziningi - abathandi yemisebenzi omlobi.
National kwebuciko ngenxa I. K. Ayvazovskogo e Feodosia kulondoloza inkumbulo seascape engcono zezwe futhi imele zonke abathandi yebuciko omangalisayo umculi.
Igalari wavulwa phakathi nesikhathi sokuphila kwakhe, eminyakeni engu-80 yekhulu nesishiyagalolunye, futhi namuhla iqoqo eliyingqayizivele imidwebo kanye nobunye ubuciko, amakhophi angaphezu kuka-13 eziyinkulungwane.
Isikhombi Museum kwamanzi e Balaklava ukuzobona izinkulungwane zezivakashi. Museum yasungulwa ngesisekelo isitshalo ukulungisa ngwenya, esemgwaqweni entabeni, ezinde amamitha 120 ngaphezu kogu lolwandle. izindawo Underground ezigcinwe kahle, dala embukisweni ngomlando Navy Soviet, okuyizinto kakhulu.
ukuchayeka abahlukahlukene wadala ezingxenyeni ezihlukahlukene Crimean singaba sincane okuthakazelisayo futhi kujabulise.
Crimean Peninsula ezikhangayo akupheli. Ogwini olungasentshonalanga yoLwandle charm, ngasempumalanga - nezinye, ne-South Coast - ngokuvamile fount izimfanelo. Seascapes, entabeni namathafa, izikhumbuzo izakhiwo kanye ubuciko, iminyuziyamu zomlando nakwezinye izindawo abacebile eCrimea - konke, ziyafundisa, enhle futhi ekhangayo.
Ukudoba base "evikelwe Tale", Astrakhan incazelo
City Baltiysk: zokungcebeleka kanye nomlando
Torzhok Izikhangibavakashi: yini ukubona?
Diamond Isikhwama: hambo, amathikithi Museum kanye nokusebenza
Vera Gornostaeva: Biography of wopiyano odumile
Kazi kungani cat Liyaqebekula abanyathela wena?
Mesotherapy esiswini, kwamathanga nobuso
Medicine "Grippol plus": Izincomo zokusetshenziswa
Sitolo sekudla lokuphekiwe Alushta: simo the best. Amakheli incazelo imenyu